Nalalka & Qalabka
Godadka & Qurxinta
Plats Basking Platforms
Xanjada & muruqyada
Cunnooyinka Xanjada & Tongs
Jiaxing Nomoy Pet Products Co., Ltd.waxaa la aasaasay 2008, kaas oo isku daraya qaabeynta, waxsoosaarka iibka alaabada xayawaannada. Warshadda shirkaddu waxay ku taalaa beerta warshadaha ee Xinhuang, xafiiska iibintuna wuxuu ku yaal muuqaalka wanaagsan ee Degmada Nanhu, Jiaxing. Shirkadda ayaa hadda leh inka badan 100 shaqaale, oo ay ku jiraan wakiilo iibka, cilmi baarista naqshada iyo kooxda horumarinta, shaqaalaha adeegga macaamiisha iyo soo saarista iyo xirxirayaasha shaqaalaha.
Maaddaama aad tahay mid ka mid ah kuwa ugu waa weyn soosaarayaasha qalabka xayawaanka ah ee Shiinaha, shirkaddayadu waxay leedahay alaabooyin isdaba joog ah oo dhammaystiran oo kugu siin kara adeeg dhammaystiran. Wax soo saareyaasheena ayaa ka wada dalka oo dhan waxaanan aasaasnay ​​xiriir iskaashi xasiloon oo muddo dheer ah oo aan iyaga la gaarno. Sidoo kale, waxaan alaabada ka iibinaa Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka, Mareykanka iyo waddamada kale ee Yurub iyo Mareykanka iyo Japan, Korea, Thailand iyo dalal kale oo Aasiya.
Nomoy Pet Products wuxuu had iyo jeer u hoggaansanaa baahiyaha macaamiisha oo ah udub-dhexaadka wuxuuna diiradda saarayaa horumarinta suuqyada kala-guurka ah iyada oo la siinayo alaabo tayo sare leh iyo adeeg fiiro leh. Shirkaddayada ayaa si tartiib tartiib ah ugu guuleysatay kalsoonida shirkado badan iyo faallooyinka wanaagsan waxayna ku muteysteen sumcad wanaagsan xagga warshadaha wax iibiya markay bixiyaan noocyo kala duwan oo alaab ah.
Waad ku mahadsan tahay doorashada Jiaxing Nomoy Pet Products Co., Ltd.si aan fursad ugu helno inaan ku wada shaqeyno. Waxaan aaminsanahay inaan labadeenaba ku heli doonno waqti wanaagsan oo ku saleysan is aaminaadda iyo isfahamka. Fahamka iyo aaminaada noocan ah waa buundada iyo isku xirnaanta iskaashigeenna farxadda leh. Ruuxeenu wuxuu ula dhaqmaa macaamiil kasta kalsooni, wanaag, fiiro iyo tixgalin adeeg hufan.
Cinwaanka: Jiaxing Nomoy Pet Products Co., Ltd.